Maraykanka Oo 15 Milyan Oo Dolar Madaxiisa Duldhigay Madaxwayne Xilka Haya Iyo Sobobta - Borama News Network %
Maraykanka Oo 15 Milyan Oo Dolar Madaxiisa Duldhigay Madaxwayne Xilka Haya Iyo Sobobta
Mareykanka ayaa dacwad kusoo oogay madaxweynaha waddanka Venezuela, Nicolás Maduro iyo saraakiil sar sare uu u dhashay dalkaas, kuwaasoo uu ku tilmaamay inay yihiin “argagixisanimo dhinaca daroogada ah”.
Dacwdahan waxaa ku dhawaaqay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr. Abaalmarin lacageed oo gaareysa $15milyan oo doolar (£12.5m) ayaa loo ballan qaaday qofkii keena xog horseedysa in lasoo xiro Mr Maduro.
Marka laga soo tago Mr Maduro, Mareykanka wuxuu dacwado noocaas ah kusoo oogay in ka badan toban ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa dowladda waddankaas.
Waxaa shakhsiyaadkan ka mid ah wasiirka gaashaandhigga ee dalkaas iyo madaxa caddaaladda ee maxkamadda ugu sarreysa Venezuela.
“Dadka reer Venezuela waxay u qalmaan dowlad mas’uuliyad leh, howlaheeda ay cadyihiin wakiilna ka noqon karta shacabkeeda iyo adeegga ay u baahan yihiin – dowladdaasoo aan ku shaqa lahayn arrimaha sharcidarrada ah iyo kala gudbinta daroogada,” sidaas waxaa lagu yiri bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Venezuela, Jorge Arreaza, oo ka jawaabeysay hadalka kasoo baxay Mareykanka, ayaa gaashaanka u daruuray waxa uu ugu yeeray “eedeymo aan sal iyo raad toona lahayn”.
“Dhibaatada uu dareemayo Aqalka Cad waa natiijada looga jeedo nabadda ka dhalaneysa Venezuela,” ayuu yiri.
Mr Maduro qudhiisa oo bartiisa Twitter-ka qoraal soo dhigay ayaa ku eedeeyay dowladaha Mareykanka iyo Colombia inay dhiirrigalinayaan qalalaasaha Venezuela.
Wuxuu muddo dheer Mareykanka ku dhaliilayay inuu isku dayayo sidii uu u afgambin lahaa dowladdiisa, si markaas uu gacanta ugu dhigo keydadka saliidda ee Venezuela.
Baylood Diyaarada Milatari Oo Jabuutiyaan Ah Oo Dalkiisa Kala Goostay Diyaarada Iyo Sobobta Oo Uu Sheegay
Maamulka Puntland Oo Maanta Dhaqaln Galinaya Go’aamadii Ay Soo Saareen Ee Qaadka Lagu Joojinayay
Jaamacada Ka Mid Ah Jaamacadaha Ugu Caansan Dunida Oo Gidaaradeeda Lagu Xardhay Aayado Quraan Ah
“Dadku Ha Kala Fogaadaan Oo Hala Kala Baaho” Maayirka Magaalada Bora Oo Fariin U Diray Shacabka
Bnnstaff Bnnstaff April 1, 2020
Ilhan Cumar Oo Cabsi Gelin Ku Tilmaamtey Dacwadii NISA Ee Wariye Haaruun Macruuf
Bnnstaff Bnnstaff April 26, 2020 April 26, 2020